ज्ञानेन्द्र मल्लको अर्धशतक, नेपाल १७४ मा रोकियो - Nepal Cricket
Gyanendra Malla celebrated his third fifty in ODI career. He made 55 from 104 balls.
आईसीसी विश्वकप लिग २ अन्तर्गत दोस्रो सिरिजमा नेपालले अमेरिकालाई १७५ रनको लक्ष्य दिएको छ । ओमानमा जारी खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ४८ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १७४ रन बनाएको हो।
नेपालको ओपनिङ जोडी धेरै बेर टिक्न सकेन । तेस्रो ओभरको अन्तिम बलमा नेपालले पहिलो विकेट गुमाएको थियो । ३ रन बनाएर आशिफ शेख डेब्यु गरेका फिलिप्सको पहिलो सिकार भए ।
आशिफ आउट भएपछि क्रिजमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल आएका थिए । ज्ञानेन्द्रले व्यक्तिगतरुपमा सम्हालिएर प्रदर्शन गरे पनि अर्को इन्डबाट लगातार विकेट पतनको श्रृंखला शुरु भएको थियो । नेपालले ५६ रन जोडेका बेला अर्का ओपनर कुशल भुर्तेल ३६ रन बनाएर पभेलिन फर्किएका थिए ।
तर, विनोद पनि व्यक्तिगत १० रन बनाएर आउट हुँदा नेपालको स्थिती निकै कम्जोर थियो । त्यसपछी नेपालले ब्याटिङ क्रममा केहि परिवर्तन गर्‍यो । कुशल मल्लको साट्टोमा आजै डेब्यु गरेका गुलसन झालाई पठाइयो । झा र मल्लले नेपालको स्कोर १०० रन कटाएका थिए । अमेरिकाविरुद्ध झाले सम्यमित पारि खेल्दै राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । १४० रन भएका बेला गुलसन झा व्यक्तिगत २८ रनमा आउट भए ।
ज्ञानेन्द्रले नेपालका लागि एक दिवसीय क्रिकेटमा सर्वाधिक रन बनाउन पारस खड्काको ३१५ रनको रेकर्ड आफ्नो नाममा बनाए । पारसले सन्यास लिइसकेका छन् । उनले आज जोडेको ५५ रनसहित समग्रमा ३६६ रन बनाएका छन् ।